တရုတ် Anodized nameplate, အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်လိုဂို | WEIHUA ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Weihua
hard disk shell ကို + ကွန်ပျူတာထောက်ခံမှု
alum ပန်းကန် (ကြေးနီပြား) + ပုံနှိပ် + တံဆိပ်ခေါင်း
Alum ပန်းကန် + တံဆိပ်တုံး + CD ကိုဘောဇဉ် + anodizing
Alum သွပ်အလွိုင်း diecast + သွပ်ရည်စိမ် +
Alum + အအေးခံခြင်း + ဆေးသုတ် (anodize) + ဘောဇဉ်
သံမဏိ + ကြေးနီ + စွဲ + ပန်းချီ + electroforming
Alum + ခုံ + CNC + Anodized
Alum + ပုံနှိပ်ကူးခြင်း + cnc + Anodized
Optical Coating + PVD Plating + ပက်ဖြန်း
သတ္တု nameplates အမျိုးအစား
လူမီနီယမ် Extrusion အသိပညာ
စိတ်ကြိုက်လူမီနီယံ nameplates, အီလက်ထရောနစ်က c များအတွက်သင့်လျော်သော ...
စိတ်ကြိုက် extrusions လူမီနီယံ, အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်အိမ် ...
စိတ်ကြိုက်သတ္တု nameplates, ထုံးစံစပီကာများအတွက်သင့်လျော်သော ...
စိတ်ကြိုက်သတ္တု nameplate, High-end လူမီနီယံ nameplate ...
သတ္တုအမည်ပြား, Oval CD ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ nameplate | ဝိုင်ဟွာ
အလူမီနီယမ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ အပူပေးစက်အတွက်သင့်တော်သည် | ...
အလူမီနီယံ extrusion ထုတ်လုပ်သူများ, လျှပ်စစ်များအတွက်သင့်လျော်သော ...
စိတ်ကြိုက် extruded လူမီနီယံအဖုံးများ, အီလက်ထရောနစ်ဆေးပြင်းလိပ် ...
အလူမီနီယမ် box ကို extrusion, အီလက်ထရောနစ်ဆေးပြင်းလိပ်များအတွက်သင့်လျော်သော ...
ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တုအမည်တံဆိပ်များ၊ စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်း namepla ...
စိတ်ကြိုက်သတ္တုအမည်တံဆိပ်များ၊ Diecasting ပန်းကန် nameplat ...
Metal name tags, မီးခိုးရောင် anodized နှင့်စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်း ...
စိတ်ကြိုက်သတ္တုအမည်တံဆိပ်များ၊ အဆင့်မြင့်ကြိုးမဲ့နားကြပ်များ ...
Nameplate ဆိုင်းဘုတ်များ, High-end လူမီနီယံ nameplate | ဝိုင်ဟွာ
စိတ်ကြိုက်သတ္တုလိုဂို၊ တံဆိပ်ကပ်ထားသောအနက်ရောင် anodized တံဆိပ်ကပ်ခြင်း ...
လူမီနီယမ်အမည်ပြား၊ Custom logo နေကာမျက်မှန် | ဝိုင်ဟွာ
နာမည်ပြားထုတ်လုပ်သူကာတွန်းတံဆိပ် | ဝိုင်ဟွာ
Anodized nameplate, အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်လိုဂို | ဝိုင်ဟွာ
Anodizing ဆိုသည်မှာသက်ဆိုင်ရာ electrolyte နှင့်တိကျသောဖြစ်စဉ်များအခြေအနေများအောက်ရှိ external current ၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်အလူမီနီယမ်နှင့်၎င်း၏သတ္တုစပ်များသည် aluminium product (anode) တွင်အောက်ဆိုဒ် film ဖြစ်ပေါ်စေသောဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါ workpiece ၏ချေးခံနိုင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်။ အဆိုပါအန်ဒရိုဂျင်အလူမီနီယမ်ပြားသည်၎င်း၏မာကျောမှုနှင့် ၀ တ်မှုန့်မှုကိုကောင်းမွန်စေသည်။ ကောင်းမွန်သောအပူခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ခိုင်ခံ့သောကာရံထားသောရုပ်ရှင်၏အရည်ပျော်မှတ်သည် ၂၃၂၀ ကီလိုဂရမ်အထိမြင့်မားသည်။ insulator တွင်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၂၀၀၀ ဗို့အားပြတ်တောက်သောဗို့အားသည်ပျက်စီးသွားသည်။ ၎င်းသည်ဆားမှုန်ရေမွှားများကိုနာရီပေါင်းများစွာပျက်စီးစေသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်ဓာတ်ပြုခြင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အဓိကအရောင်ယုတ်ခြင်းနှင့်အနက်ရောင်သုတ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသောမျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
နာမည်: အနက်ရောင် anodized နှင့်စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်း nameplate
ပစ္စည်း 1070 လူမီနီယမ်
မျက်နှာပြင်အပြီးသတ်: မျက်နှာပြင်အပြီးသတ် - anodizing + စိန်ဖြတ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ် ဖြတ်တောက်ခြင်း + တံဆိပ်တုံး + ရေနံပုံနှိပ်ခြင်း + အလွတ် + ပန်းချီ + မုန့်ဖုတ် + လုပ်ခြင်း + လေဆာတပ်မက်ခြင်း + စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်း + စစ်ဆေးမှုအပြည့် + အထုပ်
အဘယ်ကြောင့်လူမီနီယံ anodized ဆိုင်းဘုတ်များ "မျက်နှာသာ" သလဲ
The anodized လူမီနီယံပန်းကန်ခိုင်ခံ့သောအလှဆင်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးအလယ်အလတ်မာကျောမှုရှိပြီးအလွယ်တကူကွေး။ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်မြန်နှုန်းမြင့်ပုံနှိပ်ခြင်းကိုရှုပ်ထွေးသောမျက်နှာပြင်ကုသမှုမပါဘဲပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသံသရာကိုများစွာလျော့ကျစေပြီးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုလျော့နည်းစေသည်။
စံအထူအောက်ဆိုဒ်အဖုံး (3μm) ပါ ၀ င်သည့်အလူမီနီယမ်ပြားများသည်အိမ်အတွင်း၌ကြာရှည်စွာအရောင်များပြောင်းလဲခြင်း၊ ထူထဲသောအောက်ဆိုဒ်ရုပ်ရှင် (၁၀ ~ ၂၀μm) ပါသည့်အန်ဒရိုက်ဒြပ်စင်ကိုအိမ်ပြင်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးနေရောင်ခြည်နှင့်ရေရှည်ထိတွေ့မှုကြောင့်အရောင်ကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။
မျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်း၊ မြင့်မားခြင်း၊ ကျောက်မျက်ရတနာအဆင့်သို့ရောက်ရှိခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောခြစ်ရာခုခံခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ကိုဖုံးအုပ်ထားသောဆေးသုတ်ခြင်း၊ အလူမီနီယမ် nameplates များ၏သတ္တုအရောင်ကိုထိန်းထားခြင်း၊ ခေတ်သစ်သတ္တုကိုယ်ထည်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်း၊
သန့်စင်သောသတ္တုထုတ်ကုန်များ၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဆေးသုတ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ဓာတုပစ္စည်းများမဆို၊ အပူချိန် ၆၀၀ ဒီဂရီလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့မရှိခြင်း၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်။
အဘယ်သူမျှလက်ဗွေကျန်ကြွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်, အစွန်းအထင်းအမှတ်အသားများရှိလိမ့်မည်, သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူခြင်း, ချေးအစက်အပြောက်။
Anodized အလူမီနီယမ်ပြားများကိုလက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့်အခြားအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၊ တိကျမှန်ကန်သောကိရိယာများနှင့်ရေဒီယိုစက်ကိရိယာများ၊ ဗိသုကာအလှဆင်ခြင်း၊ စက်ခွံများ၊ မီးအိမ်များနှင့်အလင်းရောင်၊ စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ လက်မှုပညာ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်အလှဆင်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ။
သင်မှာဖို့လိုပါသလား ထုံးစံ nameplateမည်သည့်ပုံစံဖြင့်? တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာသင့်အားအမြဲတမ်းအရည်အသွေးမြင့်ဆုံးတံဆိပ်ကပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအားမြင့်လေဆာရောင်ခြည်သုံးစက်သည်သင့်အတွက်စံပုံစံ / ပစ္စည်းများမည်သည့် nameplate ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အဆင့် ၁: St.St ။ ပန်းကန်
အဆင့် ၂ - စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ dwg အရလေဆာဖြတ်ခြင်း
အဆင့် ၃ - ဖုန်မှုန့်ကင်းသည့်ဆိုင်ရှိရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်အပေါ်ယံလွှာ၊ အလင်းထိတွေ့မှုပုံရိပ်
အဆင့် ၄: ဓာတ်စွဲခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာပစ္စည်းများကိုဓာတုဓာတ်ပြုမှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချေးခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားပါ
အဆင့် ၇: စက်မှုမီးဖို၊ အပူချိန်၊ အပူချိန်နိမ့်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်။
အဆင့် ၅: တစ်ချိန်ကစွဲခြင်းဖြင့်နက်ရှိုင်းပါစေ။ နှင်းကျကဲ့သို့သောနှစ်ကြိမ်စုတ်ခြင်းဖြင့် texture ကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။
အဆင့် ၈။ ပညာရှင်စစ်ဆေးရေးနှင့်ထုပ်ပိုးလုပ်သားများ
အဆင့် ၆ - ဖုန်မှုန့်ကင်းသည့်ဆိုင်တွင်ကျွမ်းကျင်သောအလုပ်သမားများနှင့်အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့်ပြုလုပ်ပါ
အဆင့် ၉ - လေကြောင်းလုပ်ငန်း၊ စက်ယန္တရားနှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အီလက်ထရောနစ်ပါးသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်တိကျမှန်ကန်သောအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်အသုံးပြုသည်
ရှေ့သို့ brushed nameplate, ခြေအိတ်ထုံးစံလိုဂို | ဝိုင်ဟွာ
နောက်တစ်ခု: တရုတ်လက်ကားများစိတ်ကြိုက်ဖက်ရှင်သတ္တု၊ တရုတ်သွပ်ကျောက်ပြား၊ ဇင့်သတ္တုပြားအတွက်လူကြိုက်များသောဒီဇိုင်း
anodised လူမီနီယံ nameplates
Metal nameplate, မြင့်မားသောပွတ်စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်း ...
သတ္တုအမည်ပြား, Oval CD ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ nameplate | နင် ...
Cast nameplates, တံဆိပ်ထုအမှတ်တံဆိပ်, Indu အတွက် nameplate ...
ကုန်ပစ္စည်း nameplate, သဲကျောက်လုပ်ခြင်း anodized namepla ...
Huizhou Weihua Technology Co. , Ltd ။ ©မူပိုင်ခွင့် - 2019-2021: All Rights Reserved ။
Hot ထုတ်ကုန်များ - Sitemap တိတိကျစွာပုံနှိပ်, cnc တိကျသောစက်, တိကျစွာအစိတ်အပိုင်းများစက် CNC, တိုက်ကြီးတိကျစွာပုံနှိပ်,